Dambudziko Bots - Semalt Inopa Mazano Maitiro Okugadzirisa Iyo Nyaya
Alexander Peresunko, the Semalt Mutungamiri Akabudirira Mutengi, anotaura kuti kuchinja kwemajeri kwakachinja zvikuru nzira yatinoshandisa mabhizinesi edu uye mararamiro edu. Tinotenda nekuda kwekombiyuta uye yefoni yehutaneti pamwe nehutachiona hwepasi pose kupfuura 3 mabhiriyoni evanhu vanoshandisa internet kuti vataure nevanin'ina vavo. Kunze kwezvo, kutengesa kwepaIndaneti uye kukwira kwetikiti dzendege zvakava chikamu chinokosha muupenyu hwemazuva ano - mpex manual.
Purogiramu dzeIndaneti dzakashandurwa
Mapurogiramu eIndaneti akashandurwa ayo anozivikanwawo seti bots akaumbwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Dzimwe dzadzo dzakanaka apo dzimwe dzakaipa. Zvakanaka zvinosanganisira social media bots, search engine bots, bots aggregator bots nevamwe. Mabhii akaipa kana akaipa akave akasika nevashambadzi kuti vape ruzivo rwako pachako uye uite mabasa akashandiswa pamakombiyuta ako.
Bvisa zvinyorwa zvenhema
Mimwe yemabasa avo ari kuumba mabhadharo ekunyengedza, kuunganidza ruzivo rwemunhu oga, kugadzira zvinyorwa, zvigadzirwa, uye matengo, kukugadzira dambudziko kwauri paunenge uchitsvaga uye kutengesa matikiti paIndaneti, nezvimwe zvakadaro. Mabasa asina kunaka akadaro haasingaperi uye anofanirwa kudziviswa nenzira dzose..Semuenzaniso, kana uri kutamba bhizinesi rekuInternet, iwe unogona kukuvadza webhusaiti yako kana iwe uchiramba uchirwisana ne bad bots. Vanyori nevadzikwi vanogona kudziviswa nekudzivirira ma IP adresses.
Kuongorora Mavhareji eSeva
Apache, NGINX, uye ISS magwaro evharegi anogona kuongororwa kuti aone mabasa akaipa uye mabhoji emapeji ako. Nguva imwe neimwe, gwaro racho rinotumirwa kune pepanheti, unofanira kugadzira mapuranga kuti uzive IP kero uye mushandisi. Paunenge wazviona zvose zviri zviviri, zvingava nyore kwauri kuvadzivisa rimwe nerimwe. Zvimwe, iwe unogona kuvhara iyo IPs uye kuvadzivisa kubva pawe web browsers kunyanya Firewall. Iyo inobata basa uye inogona kudya maawa mazhinji, asi zvigumisiro zvinoshamisa uye zvisingapfuuri zvaunotarisira.
Ratidza CAPTCHA kune maboth maviri uye vanhu chaivo kuti vadzivirire webhusaiti yako kubva kune vanosemesa. Ndiyo imwe yenzira dzakajairika uye dzinoshamisa kudzivirira mabhoti akaipa nemabhobhoti pamapeji ako ose akakodzera. CAPTCHA inofanira kuratidzirwa kuvanhu vose kana bots vanoshanyira website yenyu pasina mvumo yenyu.
Ndicho chimwe chezvikanganiso zvakakura zvakasiyana-siyana webmasters zvinogadzira kuisa robots.txt kuDavallow URLs, tichifunga kuti vanocheka uye bots, zvakanaka kana zvakaipa, havangadariki kuburikidza newebsite dzavo. Hazvingakanganisi kutaura kuti nzira iyi inotora nguva yakawanda, asi zvigumisiro zvinogara zvakanaka. Iwe unogona kubvisa mabhoti nekuchinja zvigadziro mumagwaro ako mafaira. Muchidimbu, iwe unofanirwa kubhadhara ma robots.txt faira kuti usiye scrapers kuti urege kuba webhu yako nezvinyorwa.